Ubalimazile abanye umyalelo | Isolezwe
Ubalimazile abanye umyalelo
Isolezwe / 17 July 2012, 12:49pm /
YIZE ezinye izikole zikwazile ukuphakela abafundi ukudla kodwa abanye abafundi babulawe yindlala njengoba uMnyango wezeMfundo uthumele ngomzuzu wokugcina umyalelo wokuthi akuqhubeke izinkampani ezindala ebeziphakela ukudla.
Lo myalelo okhishwe ngamaholidi kwezinye izikole awufikanga njengoba bekuvaliwe kanti nezinye izinkampani okuthiwa aziqhubeke ziphakele izingane azikazisayini izivumelwano noMnyango okwenza kube nzima ukuqhubeka singekho isivumelwano nento ebambekayo. Izikole zaziqoka izinkampani ezizophakela abafundi ngoMashi kodwa uMnyango washaya ingwiji ngomzuzu wokugcina wathi akuqhubeke ezindala ngenxa yenkohlakalo.
Abanye othishanhloko bezikole eThekwini naseNkandla abacele ukungadalulwa bathe i-circular ifike ngemuva kwesikhathi ingasekho into abangayenza.
Bathe ukuvalwa kwezikole kubalimazile ngoba zivalwe bedunguza ebumnyameni bengazi ukuthi iyiphi inkampani ezophakela abafundi uma kuvulwa izikole.
“Bekuvaliwe sizwa emaphephandabeni ukuthi kunomyalelo ophumile wokuthi kumele kuqhubeke izinkampani ezindala. Mina nje la eNkandla asikayitholi leyo-circular abafundi abazange badle,” usho kanje.
Uthishanhloko wesikole saseThekwini, uthe yize abafundi bengazange badle izolo kodwa namhlanje kuzolunga ngoba usemazisile umnikazi wenkampani ukuthi kuzoqhubeka abadala.
UMnuz Nkosinathi Sishi oyiNhloko yoMnyango wathi kuzoqhubeka izinkampani ezindala kuze kube nguNovemba ngemuva kokuba ithimba eliphenya inkohlakalo kulolu hlelo luthole ukuthi kunuka phu inkohlakalo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo, uMnuz Muzi Mahlambi uthe bazosebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi bonke abafundi bayadla ngoba kukhona abathembele kulolu hlelo. Uthe abaphathi beziyingi namaWadi kumele baqinisekise ukuthi othishanhloko bayitholile i-circular.
“Siyadabuka ukuthi kwezinye izikole akuzange kudliwe ngoba baningi abathembele kulolu hlelo esifundazweni futhi sizoqinisekisa ukuthi asiphumuli zingakadli zonke izingane,” usho kanje.
Uthe ngaphandle kokungadli kwabafundi azikho ezinye izigameko ezibikiwe eziphazamise usuku lokuqala lokuvulwa kwezikole njengoba bekuvalelwe amaholidi asebusika.
Uthe naseSisonke isimo besingesimbi njengoba belikhithikile kungahambeki nasemigwaqweni.